Conky, yakajeka kwazvo system yekutarisa | Linux Vakapindwa muropa
Joaquin Garcia | | Sisitimu Yekutonga, General, Zvirongwa
Mukuparadzirwa kweGnu / Linux, semamwe masisitimu, pane maonitita ehurongwa anotiratidza mashandiro emuchina wedu. MuGnu / Linux, kusiyana nemamwe akawanda, pane yakajeka system system iyo inogara pane desktop uye isingatore zviwanikwa zvakawanda semaapplet kana chirongwa chakazara. Iyi system yekutarisa inonzi Conky uye inowanikwa mune huru Gnu / Linux migove.
Conky ndeye system yekutarisa iyo yakagadzirirwa neakajeka mameseji faira. Mune ino yakajeka zvinyorwa faira tinoratidzira parameter yatinoda kudzora uye ivo vanozoratidzwa pane desktop sekunge yaive chikamu cheiyo Wallpaper. Kukura kweConky kwave kuchishanda zvakanyanya mukati memakore mashoma apfuura saka nguva pfupi yadarika tine zvinhu zvitsva zvisina kujairika zvecomputer Monitor
Aya mashandiro ndeyekarenda, email tireyi, rss kuverenga kana mimhanzi mutambi pakati pezvimwe zvinhu. Kuti ushandise izvi, haudi chero chimwe chinhu kunze kwekubata Conky yekumisikidza faira uye ndizvozvo.
1 Kuiswa kweConky
2 Conky Kugadziridza
Conky iri mune yakanyanya kugoverwa kuti kuiisa ingoshandisa yakajairwa nzira yekumisikidza. Saka muDebian isu tichafanirwa kushandisa aptitude, muUbuntu apt-tora, muGentoo kubuda, muArchLinux pacman, nezvimwe ... Kuziva kana yedu distro iinayo mumahofisi ayo epamutemo atinogona kushanyira iyo webhusaiti yeprojekiti Kuti titarise uye kana zvisiri, tichava pawebhusaiti iyoyo mafaera ekuiisa uye nemirairo yayo.
Kana tangoisa Conky isu tichafanirwa kuenda kune iyo .conkyrc faira kuigadzirisa. Iyi faira ichave pane peji redu rekumba uye inogona kusununguka kusununguka. Pawebhusaiti yepamutemo tichawana chikamu chinonzi "Zvinyorwa" nezvose zviyero uye nemabasa avo. Iye zvino, mu network mune zvakawanda zvigadziriso zvatinogona kuteedzera nekunamatira mune yedu .conkyrc faira kuti ive nechitarisiko chimwe chete uye basa
Chekupedzisira, kana tapedza kumisikidza, hatifanire kukanganwa kuisa iyo conky raira seimwe yeanokumbira ayo akatakurwa pakuvhurwa kwesystem, zvikasadaro iyo system yekutarisa haishande kusvikira tayiita. Iri basa riri nyore kunyangwe kuzviita zvinoenderana nekuparadzirwa.
Conky ndeimwe yeakanakisa masystem monitors kana isiri yakanakisa iripo. Kushanda kwayo kwakanaka uye kana tangoziva mashandiro ayo, mashandisiro ayo ari nyore. Zvino, kune vazhinji vanosarudza kusatambisa zviwanikwa nechishandiso ichi kana kuti havangodi kuziva ruzivo rwezvinhu zviripo. Nekudaro hazvionekwe mumasisitimu ese, kunyangwe isu tichigona kuzvichinja.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » GNU/Linux » Sisitimu Yekutonga » Conky, yakajeka kwazvo system yekutarisa